ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီ၏ အထည်အလိပ်နှင့်အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းကော်မတီဆိုင်ရာဥပဒေပြုအမတ် Hon. Mr. Felix Chung ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း ‹ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီ၏ အထည်အလိပ်နှင့်အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းကော်မတီဆိုင်ရာဥပဒေပြုအမတ် Hon. Mr. Felix Chung ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေသည်ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီ၏ အထည်အလိပ်နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကော်မတီဆိုင်ရာဥပဒေပြုအမတ် Hon. Mr. Felix Chung ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀း၃၀) နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ကြိုင်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ စက်ရုံလုပ်ငန်း မူဝါဒများပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားစေရန်ရည်ရွယ်၍ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ လာရောက်ဖွင့်လှစ်လိုခြင်းစသည့် အလုပ် သမား ရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်း စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။